Qaraxyo is Xig-xiga oo Saaka Ciidamada Ethoipianka lagula eegtay Baladweyn | KEYDMEDIA ONLINE
Qaraxyo is Xig-xiga oo Saaka Ciidamada Ethoipianka lagula eegtay Baladweyn
Baladweyn (Keydmedia) - Sida ilo waredyo ku suggan Magaalada Baladweyn ee Xarunta Gobbolka Hiiraan ay Keydmedia u xaqiijiyeen qaraxyo Miino ah oo is xig-xigay ayaa gudaha Magaalada lagula eegtay Ciidamada Ethoipianka ah ee ku suggan halkaasi, waxaana saaka qeybo ka tirsan Magaalada a jira xaalad kacanaan kadib markii ay Ciidamada Ethoipianka ay gudaha u soo galeen Magaalada.
Qaraxyadaan ayaa Ciidamada Ethopianka ah lala eegtay xili ay Biyo ka dhaansanayeen Ceel ku yaalla bartamaha Magaalada, waxaana maalin kasta marka ay Ciidamada Ethoipianka ah ay Biyaha dhaansanayaan ay Bandow ku soo roggaan Magaalada.
Warar laga helaayo Baladweyn waxaa ay tibaaxayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaaray Ciidamada Ethoipianka ah ee la weeraray inkastoo aaan la heynin tirada rasmiga ah ee khasaaraha, waxaa sidoo kale jirtay rasaas badan oo ay Ciidamada jihooyinka Magaalada u fureen.
Sikastaba qaraxyada iyo weerarada lala beegsanaayo Ciidamada Ethopianka ah ee Baladweyn ku suggan ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo badanaayay.
Wixii ku soo kordha warkaan kala soco www.Keydmedia.net